Soomaaliya ma isku filan tahay bixitaanka AMISOM ka dib? – Xeernews24
9. November 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Tirada askarta baxaysa sanadka waa kun askari, waana tiro aad u yar marka laga qiyaas qaato tirada guud ee AMISOM ee Soomaaliya ku sugan oo gaadhaysa 22 kun oo askari.
10 sano kadib maanta nidaamka dowliga ah ee Soomaaliya heer federaal iyo mid maamul goboleedba waxa uu ku baahay dalka oo dhan, waxaana gacanta lagu hayaa inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalka. AMISOM ayaa gacan ka qeysatay in qeybo ka mid ah dalka la gaadho.
“Rajadii laga lahaa AMISOM ma la gaadhay”
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/warbixin.jpg 184 274 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-11-09 09:03:462017-11-09 09:03:46Soomaaliya ma isku filan tahay bixitaanka AMISOM ka dib?
Reer Cabdirahmaan Ceeleeyee oo dhoolatus yaable ku sameeyey degaanadoodi DAAWO: Sedexda Musharax ee S/Land oo Fikir layaableh ka qaba midnimada Somalia...